Yuusuf Dabageed iyo Mas'uuliyiin kale oo si dirqi ah uga bad baaday Weerar Al Shabaab ay ugu dhigtay Gobolka Hiiraan.
Sunday December 23, 2018 - 11:33:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya dagaallo culus ay ka dhaceen deegaan kaabiga ku haya magaalada Beled Weyne.
Wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar xooggan oo dhabbagal ah ay la kulmeen maleeshiyaad katirsan maamulka isku magacaabay Hirshabelle xilli ay kusii jeedeen dhanka magaalada Maxaas.
Saaka aroortii hore ayay ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Al Shabaab weerar jidgal ah u dhigeen kolonyo ay la socdeen mas'uuliyiinta ugu sarraysa maamulka gobolka Hiiraan ee dhanka maamulka isku magacaabay Hirshabelle.
Wariye ku sugan gobolka Hiiraan ayaa soo sheegay in Yuusuf Dabageed oo ah guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale ay weerar culus kala kulmeen ciidamada Al Shabaab xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Orotan oo u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Beled Weyne.
War kooban oo kasoo baxay Al Shabaab ayay ku xaqiijisay in ciidamadeedu wadada galeen kolonyo ciidan ah oo mas'uuliyiin gelbinaya balse ma sheegin khasaaraha ka dhashay, ilo wareed madax banaan ayaa xaqiijinaya in saraakiishu ay si dirqi ah uga badbaadeen weerarka waxaana kamid ahaa Nin lagu magacaabo Taree dishe.